ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား Claude သဟဇာတ Sr; (နည်းပြများနှင့်မာစတာ Champ ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ)
Claude သဟဇာတ Sr; Butch သဟဇာတရဲ့အဖေဖြစ်ပြီး, Claude Sr; ကလပ်လိုလားသူများနှင့်နည်းပြဆရာကိုယ်တော်တိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူလည်းအဓိကချန်ပီယံဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မွေး date: ဇူလိုင် 14, 1916
မွေးရာဌာန: Savannah, ဂျော်ဂျီယာ
သေမင်း၏ date: ဇူလိုင် 23, 1989
PGA Tour အောငျမွငျမှုမြား
အဖွဲ့ဝင်, Fame ၏ကမ္ဘာ့ဖလားဂေါက်သီးဆရာများခန်းမ
Craig သဟဇာတ: "ပထမဦးဆုံးမိနစ်အတွင်းမှာပဲသူတစ်စုံတစ်ဦးကပိုကောင်း swinging နှင့်လှပသောရိုက်ချက်များရိုက်တယ်။
သူခြောက်ဦးကိုအခြားသူများစေသောသောတဦးတည်းပြဿနာဘာအဘို့ကြီးစွာသောမျက်စိခဲ့, သူတစျဦးမဟုတျဘဲအားလုံးခုနစ်ခုအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
ချို, ကနေဒီ, နစ်ဆင်နှင့် Ford: Claude သဟဇာတလေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတတစ်ဦးဂေါက်သီးနည်းပြဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်မော်ရိုကိုဘုရင်ဟာဆန် II ကိုများအတွက်သင်တန်းပို့ချခဲ့သည်။
တစ်ဦးချီကာဂိုဂေါက်သီးကလပ်မှာထို့နောက်လက်ထောက်လိုလားတဲ့ - - ထို 1937 ချီကာဂိုပွင့်လင်း, သဟဇာတ၏စီစဉ်ကလူသိရှင်ကြားတန့်မှာတော့ "မျက်နှာဖုံးအံ့ဩခြင်း" အဖြစ် In-ဝတ်စုံတစ်ရုပ်ပြ-စာအုပ်ဇာတ်ကောင်ပြိုင်ပွဲကစားခဲ့ပါတယ်။
ယူဂျင်း Claude သဟဇာတ Sr; ယနေ့ဂေါက်သီးသင်တန်းပို့ချ၏သဟဇာတမိသားစုတစ်စု၏ဘိုးဘေးအဖြစ်အကောင်းဆုံးလူသိများသည်: သူ့သားလေးယောက် - ပိုကောင်း Butch အဖြစ်လူသိများ Claude သဟဇာတဂျူနီယာ, Billy သဟဇာတ, Craig နှင့်ဒစ်ခ်အားလုံးဖေရဲ့ခြေရာအတွက်အောက်ပါအလွန်မြင့်မားမှတ်ဆရာများဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် Claude သဟဇာတ Sr; အခြားဂုဏ်ထူးရရှိထားသူ: သူကအဓိကချန်ပီယံအနိုင်ရ (Tour လိုလားတဲ့ဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြီးခဲ့သည့်ကလပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သဟဇာတပုအနိုင်ရခဲ့သည့်အခါ 1948 မာစတာ က fluke မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကစားသူတစ်ဦးအဖြစ်သူ၏စွမ်းရည်အလွန်ထိုကဲ့သို့သောသည်သူ၏မိတ်ဆွေကောင်းကဲ့သို့မိမိတစ်ခေတ်မှလူသိများခဲ့သည် ဘင် Hogan ။
သူ့ထိုအချိန်တွင် မာစတာ အနိုင်ရရှိ, သဟဇာတ Wing Foot မှာဦးခေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာ 1945 ကနေ 1978 မှတစ်ဆင့်ကြောင်းအနေအထားရှိခဲ့ပါတယ်; လမ်းတစ်လျှောက်သူလည်းဖလော်ရီဒါအတွက် Seminole ဂေါက်ကလပ်မှာနဲ့ Palm Springs, ကာလီဖိုးနီးယားအတွက် Thunderbird ကို Country Club မှာဆောင်းတွင်းလိုလားသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
တစ်နည်းပြဆရာအဖြစ်, သဟဇာတလွယ်ကူမှာမိမိကျောင်းသားများကိုချပြီးနဲ့ရိုးရိုးအမှုအရာစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အလူသိများခဲ့သည်; သူလည်းမြင့်မားနေတဲ့ဘန်ကာကစားသမားအဖြစ်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဘို့ရှာခဲ့သည်။ သူ၏အတှေးအချေါမြားသညျမိမိအငယ်ရက်ကနေလမ်းညွှန်ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည် Lighthorse ဟယ်ရီ Cooper က နှင့် Craig Wood က ။
ကစားသူတစ်ဦးအဖြစ်, သဟဇာတအများအပြားဗိုလ်ကြီးများအတွက်မြောက်မြားစွာကလပ်နှင့်ဒေသတွင်းခေါင်းစဉ်, ဒါပေမယ့်လည်းအရည်အချင်းပြည့်အနိုင်ရ (နှင့်အခြားသူများအားဖိတ်စာများလက်ခံရရှိ) ။ 1948 မာစတာမှာသဟဇာတရဲ့ 279 အချိန်ကိုများအတွက်အမှတ်ပေးစံချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်, သူသည်ငါးရိုက်ချက်များခြင်းဖြင့်ပြေးသမား-up, cari Middlecoff ရိုက်တယ်။
သဟဇာတပိုပြီးကစားလုပ်ခဲ့တယ် PGA Tour မာစတာအနိုင်ရရှိကြောင်းအောက်ပါဖြစ်ရပ်များ, နှင့် (Pete Cooper က ပူးပေါင်း. ) ကို 2-လူကိုအဖွဲ့သည် 1950 မိုင်ယာမီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေး-Ball ကိုမှာအောင်ပွဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
သူကမှာ semifinals ရောက်ရှိ PGA Championship ပြိုင်ပွဲ (၎င်း၏ပွဲကစားနှစ်အတွင်း) သုံးကြိမ်; အမေရိကန်ဖွင့်လှစ်နှစ်ခုထိပ်တန်း 10 ဦးချောခဲ့သည့် 1959 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်မှာတတိယပါဝင်သည်; နှင့် The မာစတာမှာတဦးတည်းကိုပိုမိုထိပ်တန်း 10 finish ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်, သဟဇာတ Wing Foot မှာမိမိက high-profile ကိုကလပ်အလုပ်အကိုင်အမှမှီဝဲ။ သဟဇာတမှလက်ထောက်အပြစ်တွေ Dave Marr, ပါဝင်သည်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ "အမည်" ဂေါက်သီး၏အနှစ်တဆင့်, အခြို့ က Mike Souchak နှင့် ဂျက် Burke ကဂျူနီယာ
အဆိုပါအချိန်က Ben Hogan Claude သဟဇာတရဲ့ Ace သတိပြုမိရန်ပျက်ကွက်
Lawson Little က
က Tiger Woods '' လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ဆိုတာဘာလဲ
Patti Berg ကအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ရေဗက္က - ဣဇာက်၏ဇနီး
ဒြပ်စင် Discovery Timeline ကို
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဆရာများကဘယ်လိုအများကြီး Make သလား?
နွဲ့ရေးသားခြင်း - သည်နှင့်ဆန့်ကျင်
ကျောင်းပရဝုဏ်ဟာ Off Moving ခင်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါ5အရာ
အဆိုပါချွေးလူ့ pheromones ၏အခန်းက္ပနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire
တစ်ဦးဖလော်ရီဒါက Man တကယ်ပဲဘရောင်းအိမ်တွင်းပုန်းစား မှစ. Die ခဲ့သလား
Atlas သည်ဂရိရောမ Titan ကဘယ်သူလဲ
ခရစ္စမတ် Skip Dots မှ Dot ရေတွက်
ထိပ်တန်း 100 ပေါ့ပ်သီချင်းများ 2004
Clubhead လဒ်: ဒါဟာသင်ခံစားရကူညီပါရန်ဂေါက်သီး Swing + တူးဖော်ရေးခုနှစ်တွင် Is ကဘာလဲ